Parlemantera manohana ny fitondrana : « Ny fifidianana ihany no miantoka ny fitoniana »
Avosoa 11:07:00 politique
Manoloana ny toe-draharaha mafana eto amin’ny firenena ankehitriny dia nivoaka tamin’ny fahanginany ireo solombavambahoaka sy senatera manohana ny fitondrana omaly. Nisongadina tamin’izany ny antso ho amin’ny fanajana ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika izany hoe amin’ny alalan’ny fanaovana fifidianana ihany. Io ihany no hahafahana miantoka ny fitoniana eto amin’ny firenena araka ny fanazavana nentin’ireto olom-boafidy ireto. Ankoatra izay dia mitsipaka marin-drano ny fananganana tetezamita vaovao izy ireo satria hita fa tsy niteraka fahombiazana ho an’ny firenena izany fa vao mainka aza nitarika an’i Madagasikara ho an’ny amin’ny fahantrana lalina.
Nanamafy ihany koa ireto solombavambahoaka sy senatera ireto fa tsy azo ekena ny fanakorontanana sy finiavana hampikatso ny raharaham-pirenena. Ny olom-pirenena foana mantsy no lasibatra voalohany amin’izany.
Farany dia manantitra hatrany izy ireo fa ny fifampiresahana ihany no lalana iray ahitana vahaolana amin’ny tsy fitovian-kevitra ara-politika misy amin’izao fotoana izao. Noho izany dia mbola nanamafy ny fahavononan’izy ireo hifanantona an-databatra boribory amin’ireo ankolafin-kery rehetra ny parlemantera manohana ny fitondrana.